NAB2016: Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား (P | PW) တစ်ဦးကအစိုင်အခဲသင်တန်းအတွေ့အကြုံ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » NAB2016: Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား (P | PW) တစ်ဦးကအစိုင်အခဲသင်တန်းအတွေ့အကြုံ
Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား (P | PW) NAB2016 တက်ရောက်သာ၏ 5-ရက်ပေါင်းမခံမယူခွင့်ပြုသင်တန်းအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည် တစ်လောကလုံးအလုပ်လုပ်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ post ရသောအလေ့အကျင့်, လမ်းကြောင်းသစ်နှင့် Workflows, ဒါပေမယ့်လည်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် prep နှင့်လက်ပေါ်ကဲ့သို့သောနာမည်ကျော်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်လေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်ထောက်ပံ့: အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် Adobe က, ပရီးမီးယားလိဂ် Pro ကိုနှင့် Apple နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကိုက X!
: P | PW Apple ကနောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကို X နဲ့ Premiere Pro ကိုများအတွက်နှစ်ရက်ကြာလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး့ Prep Classes ရဲ့ပေးထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား Pass ကို | အဆိုပါလက်မှတ်သင်တန်းများစံ Post ကိုအတူမပါဝင်ပါ။
Adobe Premiere Pro ကို 250 လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး့ Prep အတန်းအစား - ဧပြီလ 16 - 17
Apple ကနောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကို X ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ့် Prep အတန်းအစား - ဧပြီလ 18 - 19
အသစ် : P | PW တက္ကသိုလ် တချို့ကပျေါလှငျ, တံခါးဝ၌, သက်ဆိုင်ရာတည်းခိုသင်၏နောက် Gig ဘို့ပြင်ဆင်နေ, သင်၏ reel ပြင်ဆင်နေ၏အရေးပါမှုကိုသင်၏ခြေကိုဘယ်လိုသွားရမလဲပါဝင်သည် market- အလုပ်ဝင်ကျောင်းသားများအတွက်ဘွဲ့ရအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအံ့သြဖွယ်လမ်းကြောင်းပါ! အထူးကျောင်းသားစျေးနှုန်း ($ 495) ။ ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ session တစ်ခုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ: nabshow.com/attend/ppw-university
* အဆိုပါ : P | PW အစီအစဉ် , တည်းဖြတ်, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ရုပ်ရှင်ပညာ, အလင်းရောင်, အသံဒီဇိုင်းအရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ကိုဗီဒီယိုစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, content တွေကိုဖြန့်ဖြူး, နည်းပညာအသစ်နှင့်ပိုပြီးအပေါ် 250 အစည်းအဝေးများကျော်ပါဝင်သည်။ အားဖြင့်တစ်ခုတည်းလျှပ်တစ်ပြက်အတွင်းအစီအစဉ်ကို Explore PW အစီအစဉ် |, P ကြည့်ရှု။ အဆိုပါ : P | PW အပုဒ်ပါဝင်သည်: Post ကို | ထုတ်လုပ်မှု Motion, Graphics & VFX, ထုတ်လုပ်မှု, ကို Creative စီးပွားရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူး, P ကို ​​| PW တက္ကသိုလ်, NAB ပြရန် အခုတော့မိုဘိုင်းသတင်းစာပညာ, အနာဂတ်, လက်ဝါးကပ်တိုင်ရထားနှင့်ပိုပြီး။ * ထံမှ: www.nabshow.com/attend/post-production-world
အသစ် : P | PW လက်ကမ်းတွင်သင်တန်း အရောင်ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်တန်းဧပြီလ 16th, အ Timeline ကိုကျွမ်းကျင်: အယ်ဒီတာများဧပြီလများအတွက်အသံ-ပြီးဆုံး Techniques သည့် Timeline ကိုကျွမ်းကျင်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများဧပြီလ 18th-19th များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ကို Adobe: လမ်းကြောင်းသုံးခုကသီးခြားစနစ်တကျသင်တန်းများအတွက်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်လက်-အပေါ်အလေ့အကျင့်တစ်ခုနည်းပြဆရာဦးဆောင်သည် 20th ။ FYI: | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား Pass နှင့်အဆိုပါလက်ပေါ်သင်တန်းများစံ Post ကိုအတူမပါဝင်ပါ။ session တစ်ခု detials အဘို့နှင့်သင့်အထုပ်မှအပေါ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကဒီမှာသွားပါ: nab16.mapyourshow.com/7_0/sessions/index.cfm?advsrch-sessiontype=34&advsrch=true&advsrch-showresults=true
ဒါ့အပြင်သင်လက်လွတ်ချင်မည်မဟုတ် Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား Keynote! တနင်္ဂနွေ, N17- အတွက် 10am-11am ကနေဧပြီလ 249th တွင် DIY Post ကိုထုတ်လုပ်မှု: ဘယ်လိုအားသာချက်များ ဖန်တီး. သင်လက်လှမ်းမီသလောက်မှာ Tools များအသုံးပြုခြင်းကို Creative ထိန်းချုပ်ရေးထိန်းသိမ်းပါမှ မှ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် Visual Effects ကြီးကြပ်ရေးမှူးရောဘတ် Legato အနိုင်ရတဲ့။ ရောဘတ်သည်မိမိလက်ကို-on ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အစကတည်းကထံမှဖန်တီးမှုထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အားသာချက်များကိုဖန်တီးပေးကြောင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာရိုးရှင်းစွာကြောင်းချဉ်းကပ် ချောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ 17 ကနေတနင်္ဂနွေတွင်ဧပြီလ 11th: 05 - 12: N05- အတွက် 249 ဦးဖြစ်လာခြင်း '' ဝီစကီတန်ဂို Foxtrot '' FCP X ကိုတည်းဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်နှင့်အောင်ရုပ်ရှင်ကားအပေါ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းခုံမျက်နှာမူထူးခြားတဲ့လေ့လာ!
အဆိုပါတက်ရောက်ရန်သောသူအပေါင်းတို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြီးမြတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတစည်းရှိပါတယ် Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား (P | PW) ။ အသေးစိတ်နှင့်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးစာရင်းတွင်ပါ။ ကိုသွားပါ nabshow.com/attend/post-production-world
အားလုံးသင့်ရဲ့ NAB2016 စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုလိုအပ်ချက်များအတွက်မဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်နှင့်အတူစစ်ဆေးသေချာအောင်!
ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ၏တရားဝင်ထုတ်လုပ်သူ NABShow တိုက်ရိုက်.
2015 NAB ပြရန် 2015 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2015 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2015 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2016-03-31
ယခင်: TriCaster®အဆင့်မြင့် Edition ကို Upgrade Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအိုင်ပီဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစှမျးဆောင်ကြဉ်း
နောက်တစ်ခု: က Sky Deutschland RCS UpperCut ၏နယူးဗားရှင်းနဲ့အတူတပ်အားကစားထုတ်လွှင့်အဝေးမှထုတ်လုပ်မှု Streamlines